< teo aloha < 1 2
tamin'ny 2015-12-15, navoaka ny 2016-03-01
Tao ami'ny boriboritany iray teto andrenivohitra no, nitrangan'ity zavatra tantaraiko ity, nandritra ny fikarakarako taratasy momban'ny fisotroan-dronono, izay ilaina ny fanamarinana ny tsy niverenana nanambady,izay ny kaominina no mamoaka azy.Teo amin'ny copie de mariage no olana, satria tsy hita ilay izy,ary tsy azo soloina livret de Famille,hono, nony nivoaka anefa dia nisy nanaraka aho ary nilaza fa azo amboarina ihany raha mifanaraka, dia gaga ny tenako hoe inona no tena izy, azo atao sa tsia;tsy niditra tamin'izay dingana izay fa niezaka nitady an'ilay copie ihany,na dia nisy fahatarany aza vao vita; ka dia Hanairana ny mpitantana eny amin'ny boriboritany ihany izany.
tamin'ny 2016-01-21, navoaka ny 2016-02-26
Tompoko, Ity zavatra entiko ity dia niainako tamin'ny fanamboarana Passeport tamin'ny taona 2009, rehefa nandalo dingana samihafa dia tsy nahita olana, saingy teo amin'ny dingana farany , hivoahan'ilay passeport no nihantona, ny antony dia hoe tsy nandoa vola nihoatra tokony naloa ara-dalana.Tena talanjona ny tenako, ary tsy nanaiky hatramin'ny farany, ary dia niverimberina sy nijalijaly vao tafavoaka ilay taratasy. Ny tena nampalahelo ahy,dia voatendry tamin'ny toerana ambonimbony indray io olona io 6 taona taty aoriana,dia lasa ny saiko hoe: tsy misy fanadihadiana atao mihitsy ve ny fanendrena olona ambony eto amintsika. Misaotra tompoko
tamin'ny 2016-02-08, navoaka ny 2016-02-24
Antso ho an'i Ministeran'ny Ati-tany mba hijery akaiky ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra iray eto amin'ny Kaominina Ambanivohitry Mandabe, sy ny sekretera Jeneraliny; mba tsy ho tompon-trano mihono ianareo.
Misy tomon'andraikitra iray ao amin'io Kaominina io dia izy daholo no manapaka na ny karaman'ny mpiasa io,na ny fanasoniavana ny cahier-n'omby, na ny fakana ny Droit de Place ho an'ireo mivarotra amin'ny Trano Heva, miditra koa izy amin'ny lafiny fitantanam-bola.Tokon'ny hisy ny Audit amin'ity Kaominina ity.
tamin'ny 2016-02-03, navoaka ny 2016-02-23
Tamin'ny 2013 dia nivarotra omby ny tenako ,izay voarakitra anaty kahier, ary ny délégué no mitazona azy; Taty aoriana nisy olona very omby ,tonga teto Mandabe hitady ny ombiny ,ary rehefa nojerena dia nisy fitovizana tamin'ilay tao anaty kahie. Nisy nanova ny daty nivarotako ny omby,izay lasa Duplicata tamin'ny 2016. Voasambotra noho izany ny tenako,ary misy ny fitakiana ara-bola. Aiza tompoko ny fiarovana ny zon'olombelona amin'izany.
Naka vola hijanonan'ny fampijaliana
tamin'ny 2016-01-03, navoaka ny 2016-02-23
Ho any Filohan'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Morondava ny fitarainako.
Ny 03 Janoary 2016 dia voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fahaverezan'omby ny tenako ary, rehefa voasambotry ny mpitandro ny filaminana dia sady voadaroka no nampijaliana.
Patron'omby iray no nividy ny tanimbariko an-tery, ary dia nanaiky tsy fidiny,raha tsy izany mbola hitohy ny fampijaliana.
Volabe no laniko tamin'ny fitsaboana ary mbola tsy sitrana tanteraka hatram'izao,ka hanaovako fitarainana mba hiverenanany fananako.
Misy ny Raiamandreny eto an-tanana niezaka ny handravina saingy tsy neken'izy ireo.Tafiditra ao anatin'io tompon'andraikitra 2 eto aminay. Mangataka fijerena akaiky io zava-mitranga ioMisaotra tompoko